Masar oo weli ku taagan ISTARAATIJIYADDII ahayd inay Somalia u adeegsato CAN-TALLAAL ay Itoobiya ku madadaaliso! (Somaliland oo is miidaaminaysa) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Masar oo weli ku taagan ISTARAATIJIYADDII ahayd inay Somalia u adeegsato CAN-TALLAAL...
Masar oo weli ku taagan ISTARAATIJIYADDII ahayd inay Somalia u adeegsato CAN-TALLAAL ay Itoobiya ku madadaaliso! (Somaliland oo is miidaaminaysa)
(Hadalsame) 18 Luulyo 2020 – Masar ayaa la sheegayaa inay Maamulka Somaliland lasoo qaadday hindise ay ku doonayso saldhig badeed ay ku yeelato gobolkaasi, kaddib markii ay la kulmeen MW Somaliland.
Waxay tani ku biiraysaa ciidamo lagu dumayey gobolka Geeska Afrika tan iyo 2001-dii sida saldhigyo, xeryo tababar, saldhigyo KMG ah, xarumo saanadeed iwm.
Masar ayaa la sheegay inay Somaliland kala hadashay inay ergo is dhaafsadaan, iyadoo ay Somaliland fursad aqoonsi ka raadinayso xiriirka Masar oo aaminsan yihiin inay Jaamacadda Carabta ka raaridi karaan in Somaliland la aqoonsado maadaama ay tahay dal wayn, waloow ay taasi caqabad ka wajihi doonto isla Carabta dhexdeeda, maadaama ay DF Somalia oo ururkaa ka tirsani ay diidi doonto tillaabo kasta oo noocaas ah, taasoo ka dhigan in Somaliland ay u baahan tahay Itoobiya in ka badan Masar, marka la eego inay doonayaan in dekedda Berbera, oo ah isha dhaqaale ee haatan ugu wayn maamulkaasi, ay noqoto mid ay wax kala degto Itoobiya.
Cillada kale oo tillaabada Somaliland ka dhigeeysa mid ”ismiidaamin” lagu tilmaamay waa inay meesha ku jirto Itoobiya oo aan marna raalli ka noqonayn Masar oo saldhig ku yeelata Somaliland iyo Somaliland lafteeda oo ay dano ka waawayn kuwa Masar uga xiran yihiin Itoobiya oo ah dalka lagu xanto inuu isaguba ka dambeeyo aragtida ah inay Somaliand ka goosato Somalia.
Masar iyo Itoobiya ayaa isku haya biyaha Niilka, waxaana tillaabada Masar lagu sheegay mid ay Itoobiya iyo xitaa DF Somalia oo taageeri waydey tillaabooyinka ay iyadu ku danaysanayso, balse aysan ka dhex muuqan dan Soomaaliyeed, ku cadaadinayso.
Waxaa dheer, Masar oo aan haynin dan dhow iyo fursad deg deg ah oo ay ugu yaboohi karto Somaliland, waxa qura ee saldhig ay halkaa ku yeelato la hubo inay ka iman karaan waa in lagu dul dagaallamo halkaasi.
Tan kale, waxay tillaabadan cusub ee Masar qaadday muujinaysaa inay kaliya Somalia xusuusato marka ay Itoobiya isku qabsadaan biyaha Niilka, iyadoo la igaa inaysan marna wax micne leh ka gaysanin burburkii ku dhacay dowladnimada Somalia 1991-kii, taasoo ay ku jirto inay ka aamusnayd faragelintii iyo duullaankii ay isla Itoobiya kusoo qaadday dalka Somalia.
FG: Can-tallaal, waa cad yar oo hilib ah oo lagu xiro jillaabta lagu dabo kalluunka, si marka uu soo raaco hilibka ee qaniino ay maqaalintu u qabsato.
Previous articleAxmed Madoobe oo maanta booqanaya Cadaado (Xiriir hore oo kala dhexeeya & xeelad ku jirta booqashadan)
Next article”Iiraan waxay xiriir khatar ah la samaysatay kooxda Al Shabaab” – Foriegn Policy